Suuqa shaqada | Informationsverige.se
Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Dheeraad ku saabsan Iswiidhan / Shaqo / Suuqa shaqada
Waxa jira sharciyo iyo heshiisyo badan oo xukumaya sida looga shaqaynayo Iswiidhan. Sharciyada iyo xeerarka quseeya shaqo-bixiyaha iyo shaqo-qaata waxa lagu magacaabaa xuquuqda shaqada. Suuqa shaqadu wuxu u qaybsanyahay laba dhinac: Shaqo-bixiye iyo isbahaysiga ururka shaqaalaha. Isbahaysiga ururka shaqaaluhu waa urur ay ku jiraan dhammaan ururada shaqaalaha ee isku waaxda ah.
Waxa jira ururo shaqo-bixiye oo ay leeyihiin shaqobixiyeyaalka dawladda, degmooyinka iyo kuwa barayfadka ah. Urur shaqo-bixiye waa urur ay isugu tageen shaqo-bixiyeyaal badan si ay uga shaqeeyaan arrimaha wada quseeya.
Ururka shaqo-bixiyeyaasha barayfadka ah ee ugu weyni waa Svenskt näringsliv. Wakaaladda shaqo-bixiyeyaasha waxa ku urursan shaqo-bixiyeyaasha dawladda sida hey´adaha dawladeed ee Qasnadda Caymiska iyo Hey'adda Canshuuraha. Degmooyinka iyo Goboladda Iswiidhan SKR, waxa ku kulansan shaqobixiyeyaasha degmooyinka.
Shirkad kastaa waxa ay dooran kartaa in ay ku biirayso urur shaqobixiyo.
Urur shaqaale waa urur kala gorgortama shaqobixiyaha , musharrada shaqaalaha. Urur shaqaale wuxu ka shaqeeyaa sidii shaqaalaha xaalkooda shaqaalo u fiicnaan lahaa. Ururada shaqaale waxa ay ka jireen Iswiidhan tan iyo 1800-ladii.
Goobaha shaqooyinka intooda badan waxa ka jira naadi urur shaqaale ama wakiil goobshaqo. Naadi urur shaqaale waa koox xubno ka ah urur shaqaale oo goob shaqo kuwada sugan. Wakiil goobshaqona waa qof u hadla xubnaha goob shaqo.
Naadiyada urur shaqaale iyo wakiillada goob shaqo waxay ku jiraan urur dallad ah. Ururkaas dalladda ahi wuxu isna sii hoos tagaa urur kale oo ka sii weyn tusaale ahaan ururka LO. Waxa caadi ah in xubin laga ahaado ururka shaqaalaha iyo qasnadda shaqo-la´aanta labadaba, A-kassa. Qasnadda shaqo la´aantu waa urur dhaqaale oo lacag siiya xubnihiisa bilaa shaqada ah.
Heshiis wadareed waa heshiis qoran oo u dhexeeya shaqobixiyaha iyo urur shaqaale. Heshiis wadareedka waxa ku qoran tusaale ahaan shuruuc ku saabsan tusaale ahaan xilliyada shaqada, fasaxyada iyo mushaharka. Badiyaaba waa heshiis wadareedka waxa xukuma mushaharkaaga. Laakiin ururada oo dhan iyo shirkadaha oo dhami kuma jiraan heshiis wadareed.
Heshiis wadareed waxa lagu go´aamiyaa inta uu leegaanayo mushaharka ugu yar ee shaqaaluhu. Heshiisku waxa kale oo uu quseeyaa shaqaalaha aan ka tirsanayn wax urur shaqaale ah laakiin ka shaqeeya goob shaqaale oo ku hirta heshis wadareed. Ma jiro Iswiidhan wax sharci ah oo xaddidaya inta ay leegaanayaan mushaharrada ugu hooseeyaa.
Xafiiska Shaqada waa hey'ad qaran oo ku taala Iswiidhan oo dhan. Xafiiska Shaqada waxay shaqo raadiyaha ka caawisaa in la helo shaqo waxayna shirkadaha ka caawisaa inay helaan aqoon sax ah. Hey'adda canshuuraha waa hey'adda dawladeed ee waxyaabo ay ka mid yihiin canshuur qaadida iyo diiwaan gelinta dadweynaha. Iyagu waxay xitaa sameeyaan kaarka aqoonsiga ee dadka ka diiwaan gashan gudaha Iswiidhan. ALMI waxaa laga helaa talo bixinta shirkadaha cusub. Qayb ka mid ah shaqadayadu waa talo bixinta IFS taas oo ku aadan shirkadlayda ajaanibka ah.
SACO, Ururka dhexe ee aqoon-yahanada Iswiidha, waxay ka koobantahay 22 urur shaqaale iyo urur xirfadlay. SACO waxay matashaa aqoon-yahanada. TCO waxay urur dhexe u tahay 15 urur shaqaale oo kala duwan. Xubnaha TCO waxay ka shaqeeyaan degmooyinka, hey'adaha dawladeed, bangiyada iyo shirkadaha caymiska. LO waa wada shaqayn u dhaxaysa afar iyo toban urur shaqaale iswiidhish ah kuwaas oo matala shaqaalaha dukaamada, farsamo yaqaanada baabuurta iyo ku xigeenada kalkaalisooyinka caafimaadka.